Cook Islands Trust - Gaadiidka Badbaadada Hantida ee Badbaadada
A Kalsoonida Cook Islands wuxuu siiyaa awoodda ugu xoogan Ilaalinta hantida badda. Jasiiradaha Cook ayaa ku yaalla Koonfurta oo ah gobolka Mareykanka ee Hawaii. Waxay muujiyaan taariikhda ugu weyn ee hantida magangelyada ee kiisaska taariikhda ee ku yaalla meeraha. Maaha arrin ilaalin ah. Waxaan samaynay baaritaan balaadhan oo ku saabsan kiis kasta oo ay maxkamaduhu geynayaan imtixaanka. Xaalad waliba waxaan baranay, kalsooni si qotodheer u dhisan ayaa loo bixiyay ilaalinta hantida macmiilka. Inta badan gaar ahaan, waxaa jira laba kiis oo kan ugu awoodda badan ee awoodda sharci ee adduunka - dawladda Mareykanka - ay ahayd mid isku dayaysa in uu dhexgalo kalsoonida. Mid ka mid ah xusuus muhiim ah: Ma ogaanno a kalsooni dibadeed si looga ilaaliyo hantida dowladda Mareykanka. Waxaanu kaliya samaynaynaa kormeer.
Video ka soo Qorshayaasha Ilaalinta Hantida xiriiriye.
Sidee Cunnooyinka Aduunka ee Kombuyuutarku i Ilaalinayaan?
Maxkamad ku taal agagaarkaaga ayaa leh, "Inaad na siiso lacagta." Sidaas daraadeed, waxaad isu diyaarisaa warqad una dirtaa wakiilka. Waxaad iyaga u sheegtaa in garsoorahaaga maxaliga ah uu kugu amray inaad dib u soo celiso lacagtii. Wakiilku waxaa looga baahan yahay inuu raaco tilmaamaha lagu bixiyey Buugga Gawaarida ee Cook Islands, taas oo ah dukumiintiga lagu kalsoon yahay. Hantida badbaadada hantida ayaa sheegaysa in wakiilka ammaanku ka hortagayo inuu lacagaha ka saaro kalsoonida marka uu ka faa'iideystaha uu ka socdo maxkamad. Marka, wakiilka, oo jooga meel ka baxsan maxkamada degmadaada, wuxuu diidaa inuu raaco. Dhibaato kuma lihid sababtoo ah waxaad si xor ah u hoggaansami kartaa amarrada garsoorka waxayna weydiisan kartaa wakiilka inuu soo celiyo lacagta. Waxaad ku jirtaa "macquul ma'aha in aad wax qabato," meel oo hubaal ah oo sax ah oo difaaca sharciga ah.
Sidee loo qaabeeyaa Trust Islands Trust
Ka hor inta aan la gaarin "wax xun" oo dhacaya, adiga (kuwa ka faa'iideysanaya kalsoonida) ayaa si buuxda u xakameynaya. Sidaa darteed, waxaad maamushaa arrimaha Maaliyadeed maaliyadeed. Sida tan la dhamaystiray waa in aan sameyno a Shirkadda Xawilaadaha ee Dhulka ah (LLC). Kalsoonida waxay leedahay 100% LLC. Adigu waxaad tahay Maamulaha Jaalliyadda Jasiiradaha. Sidaa darteed, waxaad xakamaysaa hantida shirkadda LLC. Waxaad tahay saxiixa dhamaan xisaabaadka bangiga. Waxaa intaa dheer, uma baahnid inaad koontada ku qorto jasiiradaha Kobanheegan, laakiin waxay sidaas samayn kartaa dal kasta oo adduunka ah oo bixiya dhaqaale ammaan ah.
Marka, marka "wax xun" ay koraan, wakiilka ayaa ku dhaqaaqi kara inuu ku ilaaliyo. Taasi waa shirkad wakiil ah, oo ah shirkad sharci ah oo ku taal Caddaanka Aduunka, waxay si toos ah u qaadataa sida macalinka LLC.
Miyaan ku kalsoonahay Wakiilka?
Ka warran nabdoonaanta qalabkan ilaalinta hantida badda? Labo siyaabood oo amniga ah ayaa ah in wakiilka Kalsoonida Cook Islands waa shirkad sharciyaysan oo sharciyaysan. Si aad u hesho liisanka wakiilka ayaa waxaa laga yaabaa in lagu sameeyo jeegag taariikheed. Daynta waxaa loola jeedaa in macaashkaagu caymisku ka socdo talaabada wakiilka. Waxaa intaa dheer, waxaan isticmaalnaa shirkad kalsooni ah oo aan xiriir la laheyn sanadka 20.
Nabadgelyada iyo amniga macmiilka, waxaa jira hal tusaale oo uu qofka wakiilka ka ah uu guud ahaan xallin karo. Taasi waxay ah, kaliya waxay kici karaan oo keliya markii ay maxkamaduhu ku wareegi lahaayeen lacagta. Marka, su'aasha muhiimka ah ee suuliga waa sida soo socota. Ma jeclaan laheyd 100% fursadda lacagta lagu qabtay maxkamadaha? Ama aad doorbidi lahayd inaad haysato shirkad shahaadeysan oo shati leh, oo aan waligeed lacag ka qaadin macaamilka, samee ficil aad adigu siisay. Taas oo ah, inaad ka ilaaliso dadka kaa soo horjeeda inaad qaadato lacagtaada?
Marka "wax xun" ay ka dhacdo, booska koontaroolka, maareynta shirkadda LLC, ayaa laguu soo celinayaa adiga oo ku soo laabtay kursiga tijaabada ee dhammaan lacagtaada ammaan iyo ammaan.
Dhanka kale, marxaladaha khatarta ah ee sharciga ah, haddii aad leedahay alaab u baahan lacag, wakiilka ayaa kaa qaadi kara daryeelkaaga. Waad weydiisan kartaa wakiilka inuu u gudbiyo qaar ka mid ah lacagtaada qofka aad ku kalsoon tahay. Waxay, si kastaba, waxay ku siin karaan lacag loogu talagalay baahidaada. Sidaa darteed, waxaad weli haysataa awoodda aad ku heli karto lacagtaada, hase yeeshee cadawgaaga sharciga ahi maaha.
Natiijada ugu dambeysa waxay tahay in lacagta aad u shaqaysay si aad ah u amaantay oo ay tahay mid ka badbadisid habka waxyeellada.
Maxaan Ilaalin karaa?
Badbaadinta hantida ugu xoogan ee ku jirta kalsoonida Cook Islands waxay bixisaa lacag caddaan ah oo lagu haysto xisaab bangi oo amaan ah. Maxkamadaha Maraykanku waxay leeyihiin awood ay ku leeyihiin xisaabaadka Maraykanka, sidaa darteedna lacag ka dhig meel ka baxsan. Kalsoonidaada waxay sidoo kale hayn kartaa bandhiga suuqa saamiyada, haddii aad rabto. Waxaad yeelan kartaa qof xirfadle ah oo maamula dhaqaalahaaga ama adiga ama qaban kara ganacsiga interneetka ah ee adiga nafsadaada. Maskaxda ku hay, mar kale, xisaabta bangiga uma baahna in ay ku jirto jasiiradaha Cook. Waxaad ku dhisi kartaa meel kasta oo aan aqoonsanayn amarrada maxkamada shisheeye ee lagaa soo horjeedo adiga ama kalsoonidaada. Tusaale ahaan waa tusaale ahaan Switzerland, Luxembourg, Panama, Hong Kong iyo Singapore, tusaale ahaan.
Maxkamadaha aad ku nooshahay waxay awood u leeyihiin in ay qabsadaan guryaha xaafadda. Sidaa daraadeed, waxaa habboon in la dhigo hanti maguurto ah oo ku taal gudaha LLC kaas oo lahaanayo kalsoonida. Haddii kale, waxaad ku qori kartaa liis gareyn ku saabsan hantida hantida raasumaalka loo dhiibo LLC gudaha gudaha kalsoonida. Haddii ay dhacdo in wax xun ay dhacaan, waxay doorbidaan iibinta hantida dhabta ah ee aadan daneynaynin inaad iska iibisid marka laga reebo in lumiyo hantida si toos ah looga qaado qadiyadda maxkamada.
Yaa Koodhi Karaa?
Waxaan ku dhisi karnaa guulo badan oo ku saabsan Cook Islands qareenada kuwaas oo dib u iibiya macaamiishooda. Waxa kale oo aan ku dhisi karnaa dhawr jeer macaamiisheena si toos ah, kuwaas oo u baahan in la ilaaliyo ilaalinta hantida hantida badan. Intaa waxaa dheer, waxaan ku dari karnaa ereyga qorshaynta guryaha ee aad ku kalsoon tahay. Markaad dhimato, dantaada aaminaadda waxaa loo gudbin karaa carruurtaada ama kuwa kale ee aad dooranaysid.
Miyaa Loo Qaadi Karaa ama La Iska Jiraa?
Waa semi-revocable. Taasi waa, dejiyaha ayaa bedeli kara ka-faa'iideystayaasha la shaqaynta wakiilka. Haddii degeluhu uu si toos ah u beddeli karo, garsooruhu wuxuu ku qasbi karaa isticmaalka isticmaalka xakamaynta. Isaga ama iyada ayaa ku qasbi lahaa qoryaha in ay ka dhigaan cadawga xayawaanka-ka-ah ee ka-faa'iideystayaasha cusub. Xaaladdan oo kale qofka kaliya ee mas'uulka ka ah waa garsoorka. Sidaa darteed, ujeeddooyinka badbaadinta hantida, wakiilka ayaa ah bedbaad amniga isbeddelada si loo ilaaliyo ilaalinta hantida ee aamminaadda.
Xeerka Xaddidaadda Khiyaamaynta Khiyaamada
Xeerka xaddidaadda waa waqti xaddidan oo keenaya ficil sharci. Wareejinta been-abuurka ah, oo loo yaqaano been-abuurka been-abuurka ah waa iskuday in laga fogaado bixinta deynta adoo u wareejinaya hantida qof kale ama hay'ad sharci. In kastoo ay leedahay ereyga "f", waa fal madani ah mana aha dembiile. Sidaa daraadeed xeerka xaddidaadda khidmooyinka khayaanada ku lug leh waxaa loola jeedaa muddo waqti ah ka dib markii mid ka mid ah u wareejiyay hanti kale oo ka gooyey awoodda koox kale si ay u qabato dacwad sharci ah si ay u qabato hantida.
Wixii Kiniinada Aasaasiga ah ee Cook Islands, markaad hanti ku yeelato gudaha laba saacadood waxay bilaabaan isku day. Waqtiga xaddidan ee diiwaangelinta dukumiintiyada ku yaal Kobanheegan oo isku dayaya in ay hantida ka helaan Cook Island waa hal sano laga bilaabo wakhtiga kalsoonida la maalgeliyo ama laba sano laga soo bilaabo ficilka. Sababta ficilka macnaheedu waa xaqiiqooyinka u ogolaanaya qof inuu talaabo kale qaado. Shil gaari waa mid tusaale u ah ficilka. Mid kale waa jebinta heshiiska, tusaale ahaan.
Sidaa daraadeed, aan u sheegno in aad baabi'id qof ka mid ah baabuurkaaga islamarkaana aad isla markiiba dejisid kalsoonida Cook Islands. Lix bilood ka dib waad dacwooneysaa. Dacwadu waxay u badan tahay inay qaadato illaa hal sano. Waxaad racfaan qaadataa oo qaadan kartaa lix bilood oo kale. Waqtiga ay dhammaato, qofka kaa soo horjeeda ayaa xitaa keeni kari waayay dacwadaha Koonfur Kacaanka haddii uu rabo.
Xakamaynta Hantida Dhulka ee Dibadda Ka Dib Dacwad
Xitaa haddii ay garaacaan saacadaha ku yaala jasiiradda Cook ayaa waxaa jira caqabado kale oo aan caqli gal ahayn. Marka hore, waxay ku qasbanaan lahaayeen inay la dagaallamaan dagaal sharci qaali ah oo baddan. Marka labaad, waxay u baahan lahaayeen in ay caddeeyaan wixii ka baxsan hooskii shaki macquul ah in aad lacagta u geliso kalsoonidii si ay u caydhiyaan deymana gaarka ah. Aan lahayn dayn-bixiyeha hore, maskaxda ku hay, laakiin middaas mid gaar ah. Waxaa jira sababo badan oo aad ku siin karto sameynta hay'ado caalami ah. Kala duwanaanshaha wax-soo-saarka waa mid. Ka faa'iideysiga maalgashiga caalamiga ah ee leh sharciyo yar yar oo adag.
Marnaba ma aragno mid ka mid ah dejiyeyaasheena ama ka-faa'iideystayaasha aaminka "Cook Islands trust" waxaan dhistay tiro lumis ah oo sidan ah. Taasi waa haddii tallaabo sharci ah la keenay ama ka hor wakhtiga xaddidan. Maxay caadi ahaan dhacdaa waa in dacwooduhu uu arko in kharashka dacwadda uu yahay mid aan la isku halleyn karin in rajada laga qabo in uu ka badiyo fursada yar ee guusha.
Ma shaqeeyaa? Waxaan ku dhidbaynay sanduuqyada Cook Cook tan iyo bartamihii dhexe. Waqtigaas, iyada oo dhowr kun oo xafiiseed la abuuray, ma haysanno wax diiwaan ah oo macmiil ah oo lacag la'aan ah oo lacag ku soo galiyay kalsoonida Cook Islands ee koontada caalamiga ah. Xeerka kiiska, halkaasoo kalsooni loo qabo, ayaa muujinaya in ay shaqeyneyso. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, dacwad-oogaha ama deynta xukunka ayaa baxa midkoodna ay arkaan in kalsoonidu tahay meel.
Waxaa jiray dhawr jeer oo macaamiishu inoo waydiisteen Kiisaska Anderson halkaas oo shakhsiyaadka loo dhisay kalsoonidii ay lahaayeen xabsi muddo gaaban ah oo loogu talagalay ixtiraamka maxkamadda. Tani waa sababaha: Qareenka dejiya kalsoonida Andersons ayaa si qaldan u dhigay. Qareenka wuxuu qorayaa kalsoonida Andersons labadaba ka faa'iideystayaasha (kuwaas oo asal ahaan u leh kalsoonida) iyo sidoo kale ilaaliyeyaasha (yaa tilmaamaya wakiilka). Tani waxay ahayd mid aad u liidata qareenkooda.
Garsoore Maraykan ah ayaa sheegay in sababta oo ah in Anderson ay ahaayeen sidoo kale ilaaliyayaashu waxay abuurayeen "si aan macquul aheyn in ay u dhaqmaan." Warka aadka u wanaagsani waa in, inkastoo kalsoonidarradu ay liidato, haddana waxay ilaalineysaa hantida Anderson. Kiiska ayaa markaa loo wareejiyay aagagga Cook ah halka garsooraha Cook Islands iyo New Zealand ay kor u qaadeen ilaalinta hantida kalsoonida. Lacagta Anderson waxay ahayd mid ammaan ah oo ammaan ah. Tani waa caddayn aad u xoog badan oo ku saabsan ilaalinta hantida awoodda leh ee ku jirta kalsoonida Cook Islands. Xitaa marka kalsooniddu ay si aan haboon u qorin, badbaadinta hantida ayaa xoog leh.
Xirfadaha Iskudhiga ah
Waa inaad ka taxadartaa adeeg bixiye gaar ah oo leh habdhismo isku kalsooni leh oo uu ku dhisan yahay laakiin wuxuu hoos u dhigayaa dhammaan xulashooyinka kale, oo ay ku jiraan kalsoonida aynu ka hadlayno. Waxa uu leeyahay dhisme ammaan oo daciif ah oo maxaliga ah, sidaa darteed, hoos u dhigo dhammaan noocyada kale ee kale. Waxa uu iska indho-tirayaa xaqiiqda ah in ay jirto taariikhda kiisaska la caddeeyey oo muujinaysa kalsoonida ku jirta jasiiradaha Cook ayaa si isdabajoog ah u muujiyay. Hoos-u-dhac ku yimaada hay'adaha maxalliga ahi waa inay ka hooseyso garsooraha maxaliga ah. Sidaa darteed, iyada oo xoogga ilaalinta hantida aan qiimo lahayn ee lagu muujiyay in Islands Cook, inta badan ee beerta, kuwaas oo aan haysan ujeedo sir ah, ku raacsan. Nooca kalsoonida lagu sharaxay halkan ayaa ku siinaya difaaca hantida adduunka ugu xooggan.
Waxaa jira meelo kale oo ka mid ah awooda amaan ee xeebaha sida Nevis, Anguilla, Barbados iyo kuwa kale. Daraasad qoto dheer oo ku saabsan taariikhda sharciga kiisku waxay muujinaysaa in jasiiradaha Cook ay u badan yihiin inay bixiyaan ilaalinta ugu waxtarka badan.